Sidee Ayay Noqon Lahayd Nolosha EVC La’aantiis? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Sidee Ayay Noqon Lahayd Nolosha EVC La’aantiis?
Sidee Ayay Noqon Lahayd Nolosha EVC La’aantiis?
EVC Plus oo ah adeeg cusub oo ka mid ah adeegyadii kala duwanaa ee Shirkadda Hormuud ay soo kordhisay sanadahan dambe ayaa waxa uu yimid iyadoo shacabka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku nool koonfurta dalka ay haysato nabadgelyo-xumo, isbaaro, jeebsiib, safaf dhaadheer oo loogu jiro xawaaladaha, bixinta biilasha iyo howlaha kala gedisan maadaama aysan dalka ka jirin lacag fudud oo shilin Soomaali ah oo jeebka lagu qaadan karo ama lacagta qalaad oo jajab badan laga heli karo.
Inkastoo aan adeeggan mid u dhaw oo la yiraahdo M-Pesa aan Nayroobi ku isticmaali jiray, haddana waxaan aad ula yaabay oo aan Muqdisho ugu imid adeegsiga EVC Plus oo meel walba ku dhaggan. Waxaa ka sii daran in uu adeeggan kaga duwan yahay M-Pesa in uu yahay mid lacag la’aan ah.
Hodan waa gabar shidaalka ka ganacsata. Mar aan waydiinay waxa uu EVC ku soo kordhiyay nolosheeda waxay tiri “Bixinta biilasha iyo kirada, kharashka iskuulka carruurta iyo dukaameysiga oo dhan ayaan dhibaato ku qabay. Waxaa kaloo jirtay in marka aan kaash badan wato oo aan suuqa aado aan ka walwali jiray amnigeyga iyo lacagtaba. Laakiin waa Alle mahaddiis maanta ilbiriqsiyo gudahood ayaan waxaas oo dhan ku xalliyaa.”
Ma aha Hodan oo kaliya ee waxaa jira in gaadiidka dadweynaha ee loogu isticmaalka badan yahay magaalada Muqdisho ee loo yaqaano Bajaajta (Mooto saddex lugood leh) ay adeegsadaan EVC Plus. Sababtu waxaa weeye lacagta ugu yar ee lagu raaco ayaa ah nus doollar iyo wixii ka badan. 5 kun oo Bajaaj ayaa maalinkii nolol-malameedkooda ka hela lacagaha loogu diro adeegga EVC.
EVC Plus kahor, qofkii lacag u diraya gudaha dalka, wuxuu adeegsan jiray xawaaladaha isagoo bixinaya khidmad dheeri ka ah lacagta uu dirayo. Waxaas oo dhan waa ay dhamaadeen sida uu adeeggan u hirgalay. Maxamed Cali, Oday Dhaqameed Muqdisho jooga, ahna nin da’ wayn ayaa muujiyay sida uu ula yaabay adeeggan, isagoo sheegay in uu odayaal ku sugnaa tuulo ka mid ah Gobolka Galduud isagoo Xamar jooga uu qado ku marti qaaday, markii ay qadeeyeenna uu lacagtii EVC Muqdisho uga tuuray. “Waa yaabe adeeggan muxuu ahaa? Isma lahayn noloshaada waxan oo kale ayaad arki doontaa.” Isagoo madaxa gilgilaya ayuu intaa hadalkiisa ku dhameeyay.
Wiil dhallinyaro ah oo lagu naaneyso Gureey ayaa ii sheegay in adeegsiga EVC Plus uu yareeyay dadkii ay xirfadda u ahayd tuugeysiga ee toorreyda iyo bastooladaha dadka ku baaran jiray. Wuxuu yiri “Intii aan adeeggan isticmaalayay waxaan ka raystay isbaaradii aan la kulmi jiray iyo jeeb-siibkii joogtada ahaa markii aan marayo suuqayada sababtoo ah maxaaba la iga isbaareystaa ama la iga jeeb-siibaa lacagteydaba EVC ayay iigu jirtaa, iyadoo ku xiran lambar sireed aanay cid kale ogaan karin?”
Isticmaalka adeeggan ayaa erey-bixinno cusub kusoo kordhiyay Af Soomaaliga sida ‘ii soo tuur’ ‘u wareeji’, ‘I tus’, ‘haraagaagu waa…’ iyo ereyo kale oo adeegsigoodu uu badan yahay waayadan dambe.
EVC waxaa ugu badnaan lagu shuban karaa 300 oo doollar sida uu ii sheegay mas’uul ka tirsan shirkadda Hormuud. Mas’uulkaas ayaan waydiiyay macnaha ereygan EVC Plus uu u taagan yahay. Wuxuu ku jawaabay “Waxan ereygan kasoo gaabinnay erayo Ingiriis ah oo ah ‘Electronic Voucher Card Plus’ (EVC+). Waxaana ugu talagalnay sida erey-bixinta ay caddeynayso in looga kaaftoomo kaarka la xoqayo oo looga kaaftoomo in qofka lacagta teleefonkiisa ku jirta uu kaar u beddelan karo si uu ugu hadlo isagoo aan tagin dukaan iyo xafiis shirkad midna. Laakiin baahiyo jira awgood ayay dadku billaabeen inay u adeegsadaan wax kala iibsiga. Aad ayaan ugu faraxsannahay in EVC uu noqday Adeeg nolosha macaamiisheenna fududeeyay”
Shuceyb oo ku koray London, balse hadda ku sugan Muqdisho ayaa noo sheegay in xilligii uu UK joogay uu lacagtiisa ku wadan jiray boorso yar (wallet) oo jeebka ugu jirta, balse labadii sano ee uu Muqdisho ku sugnaa uu adeeggan u suuragaliyay in uu lacagtiisa ku qaato telefoonka, taas oo uu u arkay inay tahay wax noloshiisa sahal uga dhigay.
Aniga qudheyda oo ka mid ah macaamiisha isticmaasha adeeggan markii aan Muqdisho imid waxaan lacag dhigtay Salaama Bank. Lacagtaas waqtiga aan doono ayaan ku shubtaa moobilkeyga kaddibna u isticmaalaa waxa aan doono. Sidoo kale waxaan dib u dhigan karaa koontadeyda Bankiga lacagaha isoo gala aniga oo aan saf u gelin Banksiga.
Dad dibadda ku maqan oo waxaa jira xawaalad ahaan EVC lacagta ugu soo dira eheladooda iyo saaxiibbadooda jooga Soomaaliya.
Sua’aasha la isweydiinayo ayaa ah noloshu sidey ahaan lahayd haddii uusan jirin Adeegga EVC Plus?
Waa adeeg nolosha Xamar iyo guud ahaan Soomaaliya aad loogu riyaaqay, noqdayna horumar weyn oo ay Soomaalidu ku faraxsan tahay. ECV la’aantiis waa tuugo dariiqyada u taagan jeebsiibka iyo baarashada shacabka, safaf dhaadheer oo loo galo xawaaladaha iyo Bankiyada, shaxaadka iyo qado ka bixinta dadka kaa fog oo joogsada, qaadashada lacagaha shilin Soomaaliga ah oo lagu dhibaatoodo iyo kala dukaameysiga shacabka iyo ganacsatada oo lagu dhibtoodo.
Inkastoo aad arkeyso dadka qaar oo leh kaashkii oo idil wuxuu ku uruuray hal meel, haddana waxay leeyihiin waxaan ku kalsoonnahay inay lacagteenna ku jirto gacan aamin ah oo aan welwel laga qabin inay lunto.
Waxaa diyaariyay: Yuusuf Xasan
Previous articleWargeyska Xaqiiqa Times Caddadka 12-aad
Next articleXil Wareejin ka dhacday Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka